B သွေးအကြောင်းး - .အ ဆင် မပြေ ရင် Back တချက်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ပါ
၁။ ။ သူတို.က ပြင်ပန်းက ကြည့်ရင် စိတ်ဓါတ်မာကျောတယ်လို. ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူတို. စိတ်ကအရမ်းနှူးညံ့ပါတယ်
၂။ ။ဘယ်လောက်ထိနှူးညံ့လည်းဆို သနားစရာဇာတ်ကားး ဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ် တွေ.ခဲ့ မြင်ခဲ့လို.ရှိရင် B သွေးပိုင်ရှင် ယောကျာ်းလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်မျက်ရည်ဝဲအောင် ခံစားတတ်ကြပါတယ်
၃။ ။အဲဒါပေမယ့်အဲ့လို မျက်ရည်ဝဲနေတာတော့ သူများးကိုမသ်ိစေချင်ဘူးးဗျ ဟန်ဆောင်ကလည်းးကောင်းတယ်လေ
၄ ။ ။ တခါမှမတွေ.ဖူး မမြင်ဖူးတဲ့သူရှေ.မှာတော့ ဆရာကြီးလို ခပ်တည်တည် မျက်နှာပေးနဲ.နေတတ်ပေမယ့် 😃 တကယ်တမ်းခင်မင်သွားရင်သူတို. က ငပေါလေးတွေလိုပါဘဲ
၅။ ။အဲ့လိုနေတတ်လို. သူတို.ကို မာနကြီးမယ့်သူ လို.သင်တို..ထင်ပါလိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရင်တော့မှားပိဗျ တကယ်ခင်သွားပိရင်တော့ သူတို.ဟာကလေးတွေ လိုအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်
၆ ။ ။ ဒါပေမယ့်သူတို.ကို မာန မကြီးဘူးထင်ရင်လည်းမှားမယ်ဗျ သူတို.မာနကြီးပိဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှလိုက်မမီ လောက်အောင်ဘဲ အဲ့ဒါ B သွေးပါ
၇။ ။ ပိတော့ သူတိုက နှူးညံ့သလို ဒေါသလည်းးအရမ်းကြီးတယ်ဗျ သူတို. တခါစိတ်တို ပိဆိုရင် တခြားသွေးအမျိုးအစားတွေကစိတ်ဆိုးပြေလွယ်ပေမယ့် သူတို.ကတော်ယုံနဲ.စိတ်ဆိုးမပြေတတ်ကြဘူးဗျ
၈။ ။ ဘယ်လောက်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်တော်ယုံခွင့်မလွှတ်တတ်ကြဘူးဗျ သူတို. ကိုစချော့လိုက်ရင်တော့ မျက်နှာကြီးးစူပုပ်ပိ သငိ့ကိုကြည့်နေပါလိမ့်မယ် ဘာလို.လည်းဆိုတော့ အဲ့လိုစူပုပ်ပိ ကြည့်နေတာက ကျေနပ်လို.လေ ခနနေ သူရီတော့မှာ သေချာတယ်
၉။ ။ B သွေးတွေမှာ ထူးခြားတာ တခုက အမှတ်သည်းခြေ အရမ်းးကြီးတတ်ကြတယ်ဗျ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်ယုံမမေ့တတ်ဘူးး
၁၀။ ။ သူတို.က မှတ်ဥာဏ်ကောင်းးတဲ့ နေရာမှာတော့ဘယ်သူမှ မမီဘူးး ဒါပေမယ့်စာတော့ ကောင်းကောင်းးမကျက်ဘူးဗျ ဒါ့ကြောင့် အမှတ်ထွက်ရင်သူ များထက်နဲတယ်
၁၂။ ။ B သွေးရဲ. အားနည်းချက်က နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ တခုက တဖက်သားကိုအရမ်းအားနာတတ်တယ် နောက်တခုက အပျင်းထူတယ်ပေါ့ဗျာ
၁၃။ ။B သွေးမှာ အများနဲ. မတူတဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်
အဲ့ဒါက သူတို.တွေက တယောက်တည်းနေရတာ သဘောကျတယ် ရောရောနှောနှော သိပ်မနေတတ်ဘူးဗျ သူတို.ရောရောနှောနှော နေတတ်တဲ့သူ က သူတို.ချစ်တဲ့သူနဲ. သူတို.အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါဘဲ
၁၄။ ။ သူတို.ကို ကြည့်လိုက်ပါ အမြဲတမ်းလူရှင်းတဲ့ နေရာတခုမှာထိုင်ပိ ဖုန်းးကလိရင်ကလိနေမယ် စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ချင်ဖတ်နေမယ် အော်စာအုပ်ဖတ်ရတာထက် ဖုန်းပွတ်ရတာပိုဝါသနာပါတယ်ဗျ 😃
၁၅။ ။ နောက်တခုက B သွေးတွေက စကားနည်းတယ် သူတို.စကားအရမ်းးပြောပိ ငပေါလေးတွေလိုနေတတ် တဲ့အခါသိချင်ရင် သူတို.ချစ်သူနဲ. အတူရှိနေတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် သူတ်ို.ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းးတွေနဲ. အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ သင် သူတို.ကို ကြည့်ပိ အံ့အော်မိပါလိမ့်မယ် ဘာလို.ဆို သူတို. စကားးတွေအရမ်းးပြောနေလို.လေ
၁၆ ။ ။ ပိတော့နောက်တခုရှိတယ် သူတို.က စကားနည်းသလို အပြုံးလည်းးနည်းတယ်ဗျ လိုအပ်မှပြုံးတတ်ကြတယ် သူတို.ပြုံးလိုက်ရင်လည်းး အခြားးသူတွေထက်ပိုလှတယ် ဘာလို.လည်းးဆိုတော့ B သွေးးတွေက နှုတ်ခမ်းလှကြတယ်ဗျ
၁၇။ ။ B သွေးတွေ မှာ ထူးခြားတာနောက်တခုက စိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ်လိုဘဲ ပြောရမလားး အဲ့လို လျောက်တွေးးနေတတ်တယ် သူတို.တယောက်ထဲရှိနေတဲ့အခါမှာပေါ့ ၁၈။ ။ နောက်တခုက သူတို.ဟာ သွေးအေးတဲ့လူစားမျိုးးပါ
အဲ့ဒါကြောင့် သူတို. စိတ်ထဲကခံစားချက်က အပြင်ပန်းမှာသိပ်မဖေါ်ပြတတ်ဘူး
အဲ့ဒါကိုကြည့်ပိ သူတို.မခံစားရဘူးတော့ မထငိပါနဲ. သူတို.ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေရင်တောင်မှ ဘာမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်နေတတ်တာလည်း B သွေးပါဘဲ
၁၉။ ။ B သွေးတွေမုန်းးဆုံး က သူတို.ကို စကားတိုပြတ်ပြတ်ပြောတာ သူတို.က စကားပြောချင်သလိုမပြောချင်သလိုပြောတာ နောက်တခုက သူတို.ကို လိမ်တာပါဘဲ
၂၀ ။ ။ သင်ဘီသွေးတွေကို လိမ်တော့မယ်ဆို သင်ဘက်ကပိပိရိရိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားးဖို.လိုမယ်ဗျ ဘာလို.လည်းဆို သူတို. က လူကဲအခတ် အရမ်းတော်တယ်ျသင်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းကို ကဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းးဆိုတာ သူတို. ကတခါထဲတန်းသိနေတယ် အဲ့ဒါကတော့ တော်တော် တော်တယ်
၂၁ ။ ။ တခုအကြံပေး ချင်တာက သူတို. က အေးအေးဆေးဆေးဘဲ နေတတ်ကြတာပါ သူတို.ကိုသွားမထိပါနဲ. သူတို. က မြွေဟောက်လိုဘဲ အဆိပ်ပြင်းးတယ်
၂၂ ။ ။ သူတို.က အရမ်းသနားဖို.ကောင်းသလို အရမ်းလည်းကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်
၂၃ ။ ။ပြီးတော့ သူတို.က အရမ်းးချစ်တတ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို.ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့ အမူအရာနဲ. သိပ်မပြတတ်ကြဘူးး ဒါ့ကြောင့်သူတို. ချစ်သူတွေရဲ. ငြိုငြင်မှုကို ခံရတတ်တယ်
၂၄။ ။ ဒါပေမယ့်သင်စိတ်ကူးမမှားပါနဲ. သင့်မှာ B သွေးချစ်သူရှိခဲရင် သူတို. ရဲ့အပြင်ပန်း ကို ကြည့်ပိသင့်ကိုသိပ်မချစ်ဘူးမထင်မိပါစေနဲ. သူတို.က သူတို.ချစ်သူကို အရမ်းးချစ်တတ်ကြပါတယ်
၂၅။ ။ ဒါပေမယ့်တခြားသွေးတွေလို ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုပိ တဖွဖွ တော့ပြောမနေတတ်ဘူး ဘာလို.လည်းဆို သူတို.က သွေးအေးတယ်လေ
၂၆ ။ ။ သူတို.က တခြားသွေးတွေထက်လည်းး သစ္စာပိုရှိတယ်ဗျ
ဒါ့ကြောင့်သင့်မှာ B သွေး ချစ်သူ တယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားရပ်ိဆို ရင် အရင်ကထက်ပိုပိ သူ.ကို တန်ဖိုးးထားလိုက်ပါ
သင်တို.အချစ်ရေး ပိုပိ သာယာ လာပါလိမ့်မယ်
မှန်ရင်လက်မလေးတွေ ထောင်ပြခဲ့နော် 👍👍
Reviewed by on 1:40 PM